Global Voices teny Malagasy · 7 Janoary 2008
Tantara tamin'ny 07 Janoary 2008
Japana07 Janoary 2008
Kenyà07 Janoary 2008
Kenya sy Afrika Atsimo: Anatra ho an'i Afrika Atsimo
Afrika Atsimo07 Janoary 2008
Tokony handray lesona tamin'izay nitranga tany Kenya i Afrika Atsimo : THE events of the last two weeks in Kenya have exposed just how fragile democracy is when it does not enjoy the protection of a country’s political leadership. “Nahariharin'ny toe-java-nisy tany Kenya ny halemen'ny demokrasia raha vao tsy maharo ny...
Brezila : fiarovana ny fahafaham-pitenenana
Jorge Serrão no nahavita soratra lavalava ny andro alahady hiresaka momba ny fahalalaham-pitenenana : A sociedade brasileira não pode aceitar que a imprensa e os cidadãos sejam calados, censurados ou corrompidos. Alguns sujeitos politicamente hediondos, que não têm o menor respeito pelos princípios democráticos, mais uma vez, se movimentam no...
Mozambika: taratasy misokatra ho an'i Barack Obama
Carlos Serra [pt], izay avy ao Mozambika no manoratra taratasy ho an'ny loholona Barack Obama, ka ao izy no mangataka hanampiany an'i Kenya: “Eny, tao no teraka ny rainao, ary Loholona ianao, anisanay ianao, Afrikana ianao, Kenyana ianao. Andriamatoa Loholona: mandraisa voromby ho any Nairobi mba hiresaka amin'ireo tarika mikorontandrotana ireo. Mila...
Mozambika: Ady anatin'ny tontolom-bolongana
Mozambika07 Janoary 2008
Reflectindo sobre Moçambique [pt] no lasan'eriteritra raha misy fizarazarana sy fifandirana amin'ny mpanabolongana Mozambikana. Ohatra iray amin'ny fanontaniana nataony ny hoe: “Misy ady ve anaty tontolom-bolongana Mozambikana? Ka rah amisy izany, inona ny antony ary inona no tanjony? Manelingelina ny sasany angaha ny fisian'ny bolongana? Iza izy ireo na inona...
Mozambika: fanontaniana enina tsotra momba an'i Afrika
Misy adihevitra mahaliana izao mandeha ao amin'ny Moçambique para Todos [pt] , Izay iezahan'ny mpamaky mamaly ny fanontanian'i Manuel de Araujo [pt] enina mikasika ny toe-draharaha eto Afrika, iray amin'ireo moa ny hoe: “ Raha manjavona ao anatin'ny fotoana fohy, ny fahamarinantoeran'ny demokrasia tahaka an'i Kenya, dia inona no azontsika lazaina amin'ny firenena...